Maxaa ka jira in uu iscasilyo Wasiirka Amniga Somalia? – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Maxaa ka jira in uu iscasilyo Wasiirka Amniga Somalia?
Wasiirka Amniga ee Xukuumadda Soomaaliya, Abuukar Ducaalle Isloow ayaa lagu wadaa in saacadaha soo socda uu ku dhawaaqo iscasilaadiisa kadib markii ay kordheen falalka amaanka darri ee ka dhaca Magaalada Muqdisho.
Wasiirka ayaa wajahaya culeyso kala duwan, kadib markii muddo hal todobaad ah ay Qaraxyo is xig xiga ay ka dhaceen Magaalada Muqdisho ee Caasimada Soomaaliya.
Qaraxyadan oo ay ku dhinteen in ka badan 30 Ruux ayaa muddo hal todobaad waxey siyaabo kala duwan uga dhaceen bartamaha Caasimada Soomaaliya.
Wasiirka Amniga ayaa lagu eedeeyay in uusan waxba ka qaban amaanka Muqdisho.
Xildhibaano Mooshin u gudbiyay Guddoomiyaha Golaha Shacabka